Kolonel Abiyi Sirna Bara darguu fii H/Sillaasee deebisaa jira. “Waa’ee jijjiirama sirna barnootaa ilaalchisee: – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKolonel Abiyi Sirna Bara darguu fii H/Sillaasee deebisaa jira. “Waa’ee jijjiirama sirna barnootaa ilaalchisee:
Kolonel Abiyi Sirna Bara darguu fii H/Sillaasee deebisaa jira.”Waa’ee jijjiirama sirna barnootaa ilaalchisee:
Waan Alamuun simee xebdu kana mee ilaalaa jamaa! Yaa oromoo ilmaan nafxanyaa afaan keef aadaa kee akkuma durii sana awwaaluuf kunoo marxiffatee lafaa kaatee jirti.dammaqii bakka jirtuu walitti labsii qabsoo kee jabbeessii ergantuu wayyaanee opdo Ofiirraa kufisiin dhaamsa keenya isa xumuratti.
Akka xalayaan Ministeerri Barnootaa gaafa guyyaa 17/12/2011 kan Dr. Xilaayeen mallattaa’e ibsutti roodmaappiin barnoota haaraa hojiirra oolee jira. Miseensota ADP warra akka Dr. Xilaayee kanatu sirna durii nurratti fe’uuf murtii dabarse.
Naannoon Tigraay roodmaappii kana hin fudhannu jedhanii ifatti didanii jiru. Naannoon Oromiyaatis ejjannoon isaanii ifa tahuu baatus nutu murteeffata jedhan.
Ministeerri Barnootaa akkuma hojii irra oolchine jedhe kanaan itti fufa moo ni fooyyessa? Yoo kan yaada fooyyessuu qabaatan tahe ibsa kennuun isaanii hin oolamu. Yoo callisan dirqamaan ummatarratti fe’uutu mala
Kolonel Abiyi Sirna Bara darguu fii H/Sillaasee deebisaa jira.
“Waa’ee jijjiirama sirna barnootaa ilaalchisee:
1. Heerri biyyattii osoo uummanni hindhaga’in dhoksaatti jijjiirame yoota’e irraa kan hafe Ministeerri Barnootaa ‘standard’ qopheessuu fi hojii barnoota ilaalchisee sadarkaa biyyaattii hojjetamu qindeessuu malee sirna barnootaa akkas waalta’aa ta’e baasee hojii irra akka ool gochuuf aangoo hinqabu, humana raaw’achiisummaas hinqabu. Sirni barnootaa Sadarkaa 1ffaa fi giddugaleessa Sadarkaa 2ffaa (jechuun Kutaa 1-8) akkuma kanaan duraa naannootti qophaa’ee hojii irra ooluu qaba, aangoo seeraas kan qabu naannoodha. Afaan daa’imman Oromoo ittiin barattu murteessuuf aangoo guutuu kan qabu uummata Oromooti malee Ministeera Barnootaa miti.
2. አማርኛ Kutaa 1 irraa kaasanii barsiisuuf yaaluun yaalii imaammata ‘assimilation’ isa bara Haayilesillaasee waan ta’eef dubbichi Great Conspiracy dha. Kan uummanni Oromoo barkurneewwan shanii oliif ofirraa lolataa ba’e tokko sirna akkasiiti, kanaaf uummanni Oromoo bara hamma kana qabsaa’aa ba’ee, wareegama hagas guddatu kaffalee deebi’ee sirna barnootaa bara nugusaatiin ijoollee ofii barsiifachuu hindanda’u.
3. Sirna barnootaa hamaa uummata Oromoo biratti fudhatama hinqabne akkasii BMNO lubbuun jira yoota’e ibsa baasuudhaan fudhatama akka hinqabne baasee gara uummata Oromoo goruu isaa mirkaneessuu qaba. BMNO sagantaa Great Conspiracy qophaa’ee ijoollee Oromoo doomsuuf asdeemaa jiru kana mormatee hin agarsiisu taanaan homaa ‘sovereignty’ hinqabu jechuudha.
4. Mootummaan amma jiru kun waa’een Afaan Oromoo አማርኛtti dabalamee afaan hojii mootummaa federaalaa ta’uun raaw’atee awwaalameera jedhee yaaduu irraan kan ka’e dubbii አማርኛ Kutaa 1 irraa kaasanii barsiisuudhaan ijoollee Oromoof carraa hojii banuuf kana goone jedhee kan yaadu yoota’ellee daa’imman Oromoo mana barnootaatti አማርኛ dabalatee afaan Ormaa kamillee barachuun filannoodhaan ta’uu qaba malee akka amma Ministeerri Barnootaa akka waan aangoo seeraa qabuu fakkeessee humnaan hojjechuuf adeemu kun tasumaa fudhatama hinqabu.”
Osuma #Abiy Gujii lameen keessatti WBO balleessina jadhee Birri Miliyoona Kudhanii (10) rammadee Raayyaa ittisa Biyyaa, Poolisii Oromiyaa, Kaadiree,Milishaa gandaa Bobbaasee Bosona sakkata’aa jadhee Xibaaruu WBOn guyyaa irraa kumaatamaan dabalaa jira. Gootichi Kibba Oromiyaa #Jaal_Goollichaan guyyaa Har’aa Humna addaa Special Commando Jadhamu kuma afurii (4000) ol guyyaa har’aa August 23, 2019 gaachana ummata Oromoo ta’uuf, Gumaa ummata Oromoo baasuuf , kaayyoo Qabsoo ummata Oromoo galmaan ga’uuf, Bilisummaa Oromoo kan ilmaan Oromoo 6000 ol itti wareegaman, Miliyoonaan Itti buqqa’aniifi Walabummaa mirkaneessuun guyyaa har’aa Eebbifamaniiru!
“Warri ummata Oromoo irra sirna gabroomfataa tursiisuuf gara bosonaa bobbaatan hojii keessan ni argattuu koottaa” Jaal Goollichaa. Qabsoon Warabummaa Oromiyaa itti fufa! Qeerroon Oromiyaa ABO/WBO cinaa jirra! Warri Dheebuu bilisummaafi Cunqursaa Sirna nama nyaataa EPRDF/OPDO dadhabdan #Share godhaa waliif qoodaa!
Dhugumaan silaa OPDO ykn akkuma isaan ja’anitti oromoon biyya bulchaa jiraatee. seerri dantaa oromoo hin eegne
1- Qubee Amaaraatiin baradhaa ja’u hin bahu
2- Afaan Oromoo afaan hujii Fedraalaa godhuu yoo dadhaban Afaan hujii Finfinnee godhuu hin dadhaban
3- sabbontoota oromoo kuma 25 caalaan badii malee hin hidhaman ture
Oromoo ijaaf gurra cufatte oduu dharaa dhugoomsuu dhiisii mirga oromoof dubbadhu
Mo’iibul Biluu Qawwee
Tuutni armaan gadii kun,dhugaatti Oromoo gandaan,kutaa fi ololaan facaasanii sagalee argachuu yaalu malee, kiiloon isaanii akkamii fi hangam akka ta’e waggaa darbe yeroo gara biyyaa dhufan yeroo ABO miseesoti isaa Ertiraa dhufan #Giyoonitti of arganii jiru😮
Qeerroon yeroo nagaa isaan gaafattu warra morma haqaaqee namatti aaru turan
ABOn Fulbaana 15 galee gaafa simannaa isaaf godhàmu argan daran aariin ciinca’an kanaaf, yeroo sana #Jaarsummaa ergatanii ABOtti akka makamaniifi ABO-T maqaan jedhus hafee ABO jedhamanii akka waamaman walii galanii ABOnis ibsa dhimma kana irratti baasee ture🤣
Guyyoota 14 booda faayidaan argame jedhamnaan ammoo ABO diiganii gara #Shira #INSA fi NISS isaanitti kenna milkeessuutti fuulleffatan!
Amma jarri akkanaa ani ABO dha yoo ofiin jedhan afaan isaanii malee isaanuma mataa isaanii lapheen isaanii hin fudhatuufi